आजको राशिफल – मिति बि.सं. २०७३ साल पौष २१ गते बिहीबार,तदानुसार इश्वी सन् २२०१७ जनवरी ५ तारीख – पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथी | karnalikhabar.com
आजको राशिफल – मिति बि.सं. २०७३ साल पौष २१ गते बिहीबार,तदानुसार इश्वी सन् २२०१७ जनवरी ५ तारीख – पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथी – karnalikhabar.com
आजको राशिफल – मिति बि.सं. २०७३ साल पौष २१ गते बिहीबार,तदानुसार इश्वी सन् २२०१७ जनवरी ५ तारीख – पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथी
प्रकाशित मिति :2017-01-05 01:52:38 आजको राशिफल – मिति बि.सं. २०७३ साल पौष २१ गते बिहीबार,तदानुसार इश्वी सन् २२०१७ जनवरी ५ तारीख – पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथी
श्री शाके १९३८ बि.सं. २०७३ साल पौष २१ गते बिहीबार तदानुसार इश्वी सन् २२०१७ जनवरी ५ तारीख – पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथी १०:५० बजे सम्म चन्द्रमा मीन राशीमा सूर्य दक्षिणायनं हेमन्त त्रृतु
खर्च बढ्ने सम्भाबना रहेको छ । सामान्य क्षती ब्यर्होनु पर्ला । कुराकाट्ने हरुको बृद्धि हुनेछ। परोपकार को क्षेत्रमा मन जानेछ । नजिकका मित्र बाट धोका हुन सक्छ । प्रेमी प्रेमीका बिच मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ।
बिद्या प्राप्ति को राम्रो योग रहेको छ । बोलिको खराब प्रभाब रहनेछ । शारीरिक आलस्यले सताउन सक्छ । नयाँ कार्य क्षेत्रको लागी लगानि गर्ने समय रहेको छ । मित्रजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । सामान्य स्वास्थ सम्बन्धि समस्या रहला ।
सन्तान सम्बन्धि समस्या ले सताउन सक्छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । भौतिक शुःख साधन प्राप्त हुनेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
धार्मिक क्षेत्रको यात्रा रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ । आफन्त जन बिच भेटघाट हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । समय मध्यम रहला ।
स्तान्तरण को योग रहको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको कारण मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला । चिसो सम्बन्धी समस्या ले सताउन सक्छ ।
दाम्पत्य शुःख प्राप्त हुनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नेछ । ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । मित्रजन बिच भेटघाट हुनेछ ।
मनको चन्चलताले कार्य क्षेत्रमा ब्यबधान प्राप्त हुने छ । सामान्य खर्च हुन सक्छ । कठिन यात्रा रहन सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन् । सहि निर्णय गर्न नसक्नाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । समय मध्यम रहला ।
भोगबिलासमा मन जानेछ । सन्तान शुःख प्राप्त हुनेछ । सामान्य चोटपटक सहनु पर्ला । नयाँ कामको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । बौधिक क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गर्ने छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ ।
मान्यजनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्ला । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आम्दानि हुने योग रहेको छ । कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ । परीवारिक समस्या झेल्नु पर्ला । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला ।
नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ । कुराकाट्ने ब्यक्ति बाट टाढै रहनु होला । यात्रा हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । दाजुभाई बिच मनमुटाब रहन सक्ला ।
बिद्या प्राप्तिको समय रहेको छ । बोलिको प्रभाबको कारण मान्यजन को साथ पाईनेछ । चिसोको प्रभाबले घाटी सम्बन्धि सामान्य असर गर्नेछ । अप्जस सहनु पर्ला । मनमा सामान्य डर पैदा हुने साथै मनमा चन्चलताले बास गर्ने छ ।
समय राम्रो रहेको छ । पारीवरिक शुःख प्राप्त हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका साधन प्राप्त हुनेछ । सामान्य यात्रा रहन सक्छ । भौतिक शुःख साधन प्राप्त हुनेछ । शारीरिक आलस्यले सताउन सक्छ ।
कसले भिडाउँदै छ अभिनेता सञ्जय दत्त र आमिर खानलाई ?
राष्ट्रिय थारु संग्रहालयको गेट शिलान्यास
ताजा समाचार कपिल र सुनीललाई म मिलाउँछु :सिद्धू पाजी